DAAWO: Baarlamaanka Soomaaliya oo isku raacay in dalka oo dhan laga mamnuuco Shirkada Imaaraatka Carabta ee DP WORLD.. – Puntlandtimes
DAAWO: Baarlamaanka Soomaaliya oo isku raacay in dalka oo dhan laga mamnuuco Shirkada Imaaraatka Carabta ee DP WORLD..
MUQDISHO(P-TIMES)- Mudanayaasha baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya ayaa saxiixay oo isku raacay Xeer cusub oo dalka Soomaaliya oo dhan looga mamnuucayo shirkada DP WORLD ee laga leeyahay dalka Imaaraatka Carabta, taas oo hadda gacanta ku haysa dekedaha Berbera & Boosaaso oo labaduba ka kala tirsan Somaliland iyo Puntland.
Mudanayaasha ayaa cod aqbalayid ah isku raacay, waxayna ku meelmariyeen in laga bilaabo maanta March 12, 2018 shirkadan laga leeyahay Imaaraatka Carabta oo dawlad gobaleedyadaas la gashay heshiisyo aysan waxba ka ogeyn dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Xildhibaanada golaha ayaa sheegay in looga baahan yahay Xukuumada Faderaalka in ay go`aankan si deg deg ah u gaarsiiso dawladda Imaaraatka Carabta oo iska leh shirkadan, waxaana muuqata in la qaaday talaabo adag oo siyaasadeed.
Gudoomiye kuxigeenka golaha baarlamaanka Faderaalka Mahad Cabdalla Cawad ayaa u akhriyey baarlamaanka Faderaalka go’aanada lasoo saaray, waxayna ku dhawaaqday Soomaaliya in ay qaadatay qaraar ay u madax banaan tahay.
MAXAY UGA DHIGAN TAHAY DAWLAD GOBALEEDYADA & SOOMAALIYA QARAARKAN GOOR DHAW SUG FALANQEYNTAAS
Masha allah waa guul iyo gobanimo Allah ayaa mahad dhamaanteed leh ka dib madaxdeena iyo golaha baarlamaankeena sharafta badan oo la soo baxay gobanimadii iyo geesinimadii lagu yaqiin isirka Soomaali in ay ka dagaalamaan cidii soo hawaysata in ay KU xadgudubto dalkeeda iyo sharafteeda Imaaraadka oo wax ismooday kuna tala galay in uu ka faa;iidaysto tabar darida awoodeen laakiin ma oga in aan caziimad leenahay oo aan fooda saarno cid kasta oo edeb daro nala soo doonata daruuf kasta oo aan KU jirno in aan u midowno cadowgeena wax kasta oo annaga dhexdeen yaal oo aan dhabarka ka tuurno khilaafaadka dhexdeena waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa Xildhabaanadeena mucaaradka ah ee Ay ka mid yihiin Mahad Salaad iyo Cabdikariin Guuleed iyo inta la mida mowqifka Ay ka qaateen arrintan ayada ah laakiin waxaan ka codsanayaa Xildhibaanada iyo Hay;adaha Dowladda ee mar walba ka hor dhaca Madaxdeen oo lagu dhaliilo ayaga oo wali ka baaraan dagaya mowqifka Ay ka qaadan lahaayeen waayo Shacabka Soomaaliyeed dhibaato badan iyo siyaasad aan daganayn ayaa ka badatay sidaa darteed waa in aan lagu furin aragtiyo kala duwan oo ka soo wada guuxaysa Hay;adaha Dowladda.
Aad baan usoo dhawaynayaa heshiiskan ay dowladdu kagaartey heshiiyadii hore ee muranka badan dhaliyey ee shirkaddan DPworld lagashay dekedaha badda cas
Waana soo dhawaynayaa
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk oo xagguu akarkoodu ka shaqeeyaa berbera ma muqdisho ayay moodeen kkkk. shirkadda waxa laga mamnuucay somalia oo ah inta farmaajo xukumo. harumarinta dekedda berbera way soconaysaa waana la arki doonaa ee ninka loo danleeyahow hays gaabinee isgaro oo ah puntland lana joojiyay harumarinta dekeddooda berbera kkkkk iyagaa mindidii lagu gawrici lahaa miiska soo dhigay kkkkk annaga noocaa aan xaafadaha muqdisho amarkoodu ka socon waxba ka weydiin mayno dalkayaga iyo dekedihiisa.
Sorry,harumarinta dekeddooda boosaaso oo shirkaddan shirkad hoos timaadaa wadday harumarinta dekedda boosaaso.
Marka arrinkoodu waa dhidar ciyay wax kasoo qaadna malaha. xagay ka taliyaan,yaa doortay,yay dawlad uyihiin? MIYAY MIYIR BEEL ASQOOBEEN,MURAARADILLAAC MA QUUSTEEN,ANNANA FARXADDII MA GAABINAYNEE KKKKKK waxaasaa dawlad la dhahaa qaawisay dawladda fadhiidka ah ee xamar fadhida tustayna caalamka waxa ay tahay ilaa carabtii Ku maadsadaan kkkkkkkkk guuuuuuuuuuuuuuuuuuul qaranka Somaliland.